fampitandremana: Fampiasana AFF_LINK tsy voafaritra tsy voafaritra - noheverina ho 'AFF_LINK' (hiteraka hadisoana amin'ny dikan-teny PHP ho avy izany) /media/soydemac.com/website/wp-content/plugins/abn-appstore/definitions.php amin'ny tsipika 22
iCloud tsy hampifandray ireo takelaka Safari amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
iCloud tsy hampifandray ireo takelaka Safari amin'ny Mac
Na dia ho an'ny maro aza ny fampifanarahana ny iCloud Faharoa izany, ho antsika izay manana fitaovana Apple marobe fa ny cloud iCloud dia miasa tanteraka dia filàna mihamitombo ary izany, ohatra, amin'ny tranga misy ahy dia mampiasa iPad, iPhone ary Mac aho noho izany ary mila ny fanovana I manaova amin'ny iray amin'ireo fitaovana ireo mba ho eo amin'ireo fitaovako hafa avy hatrany.
Ny iray amin'ireo zavatra mila ampifandraisiko amin'ny fotoana rehetra dia ireo takelaka noforoniko tamin'ny fitaovana roa. Raha efa fantatrao, nandritra ny fotoana elaela ireo takelaka ireo dia nifandrindrana tamin'ny alàlan'ny rahona iCloud. Na izany aza, misy fotoana ijanonan'ny fampifanarahana ary mila manery ny famerenana indray ianao.
Ataovy ao an-tsaina fa raha hitanao fa ny takelaka Safari amin'ny Mac sy iOS anao dia tsy mifindrafindra fahafinaretana, dia mety ho fambara fa tsy maintsy manery ny famerenana indray ny angon-drakitra Safari ianao. Raha te-hanao an'izany ianao dia mila mitantana azy ao amin'ny tontonana iCloud ao Safidin'ny rafitra> iCloud> Safari.
Ao amin'ny varavarankely iCloud dia ho hitanao ny singa rehetra ao amin'ny rafitra mifangaro miaraka amin'ny rahona. Anisan'izany ny entana Safari izay tokony hofidina amin'ny manga. Mba hananan'ny rafitra ny resync data Safari miaraka amin'ny iCloud Tsy maintsy esorinao ny safidinao, miandrasa minitra vitsy hamoahana azy ary safidio indray.
Amin'izay fotoana izay dia ho hitanao ny fanavaozan'ny takelaka Safari amin'ny Mac sy Safari ho an'ny iO anao ary hanehoana izany fampahalalana izany amin'ny sehatra roa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Sierra » iCloud tsy hampifandray ireo takelaka Safari amin'ny Mac
Ny Spotify dia nitsoaka avy amin'ny Apple Music ary nahatratra mpampiasa 50 tapitrisa